Caasimadda Canada Oo Ay Soo Foodsaartay Laydha La’aani Iyo Sababta Keentay | Berberatoday.com
Caasimadda Canada Oo Ay Soo Foodsaartay Laydha La’aani Iyo Sababta Keentay
Canada(Berberatoday.com)-Ilaa 200,000 oo guri ayaa laydh la’aani soo food saartay caasimadda dalka Canada ee Ottowa , iyada oo ay dadku cabsi badan qabaan.
Laydh la’aantan ayay sababtay Duufaanta Cyclone oo markii labaad ku dhufatay magaaladdaasi, waxaanay dumisay guryo badan , halka ay kuwo badana ka qaaday jiingadii sare.
Dufaantan ayaa wadata dabay aad u awood badan, taas oo uu Maayirka caasimadda Ottawa sheegay in ay sii socon doonto maalmo dhawr ah , waxaanu Mr Jimc Watson oo maayirka magaaladdaasi ahi sheegay in ay ilaa lix qof ku dhaawacmeen dufaantaasi.
Dufaantan oo Jimcihii magaaladda Soo gaadhey ayaa waxyeelo u geystay guryo badan oo yaala Dunropin oo ah magaalo madaxda Waqooyi galbeed dalka Canada,Gatineau oo ku taala Waqooyiga caasimadda Ottawa iyo Quebec.
Dabaylo xoogan ayaa burburiyey qaybo kamid ah xarumihii laydhka ee magaaladda Ottawa,sida ay masuuliyiinta magaaladdaasi sheegeen, waxaana go’an laydhka ilaa 200,000 oo qof guryohooda, iyada oo ay magaaladda ku nool yihiin dad gaadhaaya 1.3 Million oo qof.